Show All Most Popular Cutlery Zomato Food Menu Zomato Food New Menu Set Menu Curry Set Menu Salad Fried & Grilled Shue Shae Appetizer Soup Pounded Rice & Noodle Vegetable Seafood Chicken Fish
Zomato Food Menu
Zomato Food New Menu
Curry Set Menu
No. 64, 29th Street, Yangon, MM Pabedan
Fried Roselle with Prawn (ပုဇွန်ချဉ်ပေါင်ကြော်)(ပုဇှနျခဉျြပေါငျကွျော)
Mixed Vegetable Bean Curry (သီးစုံပဲကုလားဟင်း)(သီးစုံပဲကုလားဟငျး)
Sour Egg Curry (ဘဲဥချဉ်ဟင်း)(ဘဲဥခဉျြဟငျး)
Minced Fish Cake Curry (ငါးဖယ်ဆီပြန်ဟင်း)(ငါးဖယျဆီပွနျဟငျး)
Fried Spicy Mutton (ဆိတ်သားကြော်အစပ်)(ဆိတျသားကွျောအစပျ)
Mutton Curry Masala Recipe (ဆိတ်သားမဆလာနှပ်)(ဆိတျသားမဆလာနှပျ)
Fried Egg Rice (ကြက်ဥထမင်းကြော်)(ကွကျဥထမငျးကွျော)
Chicken Curry (ကြက်သားဆီပြန်)( ကွကျသားဆီပွနျ)
One Meat Curry + Fried Vegetable + Bean Curry + Rice
အသား ၁ မြိုး + အရှကျကွျော ၁ မြိုး + ပဲဟငျး + ထမငျးတို့စရာ
အသား ၁ မျိုး + အရွက်ကြော် ၁ မျိုး + ပဲဟင်း + ထမင်းတို့စရာ
We are trying to reduce the waste of unused cutlery, so please choose cutlery only if you need
Fried Spicy Chicken (ကြက်သားအစပ်ကြော်)(ကွကျသားအစပျကွျော)
Chicken Masala Recipe (ကြက်သားမဆလာနှပ်)(ကွကျသားမဆလာနှပျ)
Chicken Giblets Curry (ကြက်သဲမြစ်ချက်)(ကွကျသဲမွဈခကျြ)
Mrigal Fish Curry (ငါးကြင်းဆီပြန်)(ငါးကွငျးဆီပွနျ)
Fried Mrigal Fish Masala Recipe (ငါးကြင်းကြော်မဆလာနှပ်) (ငါးကွငျးကွျောမဆလာနှပျ)
Fried Spicy Mrigal Fish (ငါးကြင်းပြန်ကြော်အစပ်)(ငါးကွငျးပွနျကွျောအစပျ)
Prawn Spicy Curry (Large) (ပုဇွန်ထုပ်ကြီးဆီပြန်အစပ်ချက်)(ပုဇှနျထုပျကွီးဆီပွနျအစပျခကျြ)
Prawn Sweet Curry (Large) (ပုဇွန်ထုပ်ကြီးဆီပြန်အချိုချက်)(ပုဇှနျထုပျကွီးဆီပွနျအခြိုခကျြ)
Prawn Spicy Curry (ပုဇွန်ထုပ်ဆီပြန်အစပ်ချက်)(ပုဇှနျထုပျဆီပွနျအစပျခကျြ)
Prawn Sweet Curry (ပုဇွန်ထုပ်ဆီပြန်အချိုချက်)(ပုဇှနျထုပျဆီပွနျအခြိုခကျြ)
Fried Dried Prawn with Chilli (ပုဇွန်ခြောက်ငရုတ်သီးကြော်အစပ်)(ပုဇှနျခွောကျငရုတျသီးကွျောအစပျ)
Egg Curry (ဘဲဥဆီပြန်)(ဘဲဥဆီပွနျ)
Omelet ( 2pcs) ကြက်ဥကြော် (၂လုံး) ကွကျဥကွျော (၂လုံး)
Omelette (2pcs)(ကြက်ဥမွှေကြော် ၂လုံး)(ကွကျဥမှကွေျော ၂လုံး)
Fried Morning Glory (ကနျစှနျးရှကျကွျော)(ကန်စွန်းရွက်ကြော်)
Fried Bamboo Shoot (မျှစ်ကြော်)(မြှဈကွျော)
Fried Chilli (သကျသကျလှတျငရုတျသီးကွျော)(သက်သက်လွတ်ငရုတ်သီးကြော်)
Potato Masala (အာလူးမဆလာ)(အာလူးမဆလာ)
Fish Cake with Coconut Milk Curry (ငါးဖယ်အုန်းနို့ချက်)(ငါးဖယျအုနျးနို့ခကျြ)
1 Day Pre-Order.
Crab Masala Normal Size (ဂဏန်းမဆလာ) (ဂဏနျးမဆလာ)
Crab Masala Big Size (ဂဏန်းမဆလာ) (ဂဏနျးမဆလာ)
Sour & Spicy Crab Curry Big Size (ဂဏာနျးခဉျြစပျ)
Sour & Spicy Crab Curry Normal Size (ဂဏာနျးခဉျြစပျ)
Butter Fish (Nga Dan) Masala Curry (ငါးတန်မဆလာဟင်း) (ငါးတနျမဆလာဟငျး)
Dried Fish Curry (ငါးခြောက်ဟင်း) (ငါးခွောကျဟငျး)
Rakhine Style Mirgal (Nga Gyine) Curry (ငါးကြင်းရခိုင်ချက်)(ငါးကွငျးရခိုငျခကျြ)
Squid Curry (ပြည်ကြီးငါးဟင်း)(ပွညျကွီးငါးဟငျး)
Your Choice of Rakhine Style or Kong Pao.
Mutton Innards Curry (ဆိတ်ကလီစာ)(ဆိတျကလီစာ)
Chicken Bone Masala (ကြက်ရိုးမဆလာ)(ကွကျရိုးမဆလာ)
Fried Chicken Rice (ကြက်သားထမင်းကြော်)(ကွကျသားထမငျးကွျော)
Spicy Chicken Floss (ကြက်သားမွှကြော်စပ်) (ကွကျသားမှကွျောစပျ)
Sweet & Sour Chicken (ကြက်ချိုချဉ်)(ကွကျခြိုခဉျြ)
Kong Pao Chicken (ကြက်ကုန်းဘောင်)(ကွကျကုနျးဘောငျ)
Fried Chicken Ball with Sauce (ကြက်သားလုံးကြော်)(ကွကျသားလုံးကွျော)
Squid Salad (ပြည်ကြီးငါးသုပ်)(ပွညျကွီးငါးသုပျ)
Maubin Style Fish Cake Salad (မအူပင်ငါးဖယ်သုပ်)(မအူပငျငါးဖယျသုပျ)
Maubin Style Pickled Fish Cake Sour Salad (မအူပင်ငါးဖယ်ချဉ်သုပ်)(မအူပငျငါးဖယျခဉျြသုပျ)
Maubin Style Pickled Shrimp Sour Salad (မအူပင်ပုဇွန်ချဉ်သုပ်)(မအူပငျပုဇှနျခဉျြသုပျ)
Fried Maubin Style Pickled Fish Sour (မအူပင်ငါးချဉ်ကြော်)(မအူပငျငါးခဉျြကွျော)
Fried Maubin Style Pickled Shrimp Sour (မအူပင်ပုဇွန်ချဉ်ကြော်)(မအူပငျပုဇှနျခဉျြကွျော)
Tomato Fish Paste Curry (ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက်) (ခရမျးခဉျြသီးငပိခကျြ)
Burmese Spicy Dried Shrimp Curry (ငံပြာရည်ကြော်)(ငံပွာရညျကွျော)
Century Egg Salad (ဆေးဘဲဥသုပ်)(ဆေးဘဲဥသုပျ)
Fried Baby Corn (ပြောင်းဖူးနုနုကြော်) (ပွောငျးဖူးနုနုကွျော)
Fish Sour Soup (ငါးချဉ်ရည်ဟင်းချို)(ငါးခဉျြရညျဟငျးခြို)
Fried Duck Egg (2pcs) ဘဲဥကြော် (၂လုံး) ဘဲဥကွျော (၂လုံး)
Stir Frying Duck Egg (2pcs) ဘဲဥမွှေကြော် (၂လုံး) ဘဲဥမှကွေျော (၂လုံး)
Chicken Bone Dal Curry (ကွကျရိုးကုလားပဲဟငျး)(ကြက်ရိုးကုလားပဲဟင်း)
Prawn Curry (ပုဇှနျဆီပွနျ)(ပုဇွန်ဆီပြန်)
Fried Lady Finger (ရုံးပတီသီးကွျော)(ရုံးပတီသီးကြော်)
Fried Mixed Vegetable (အသီးအရှကျအစုံကွျော)(အသီးအရွက်အစုံကြော်)
Fried Mixed Vegetable (အစိမျးကွျော)(အစိမ်းကြော်)
Fried Broccoli (ပနျးပှငျ့စိမျးကွျော)(ပန်းပွင့်စိမ်းကြော်)
Fried Mustard Green (မုနျညှငျးစိမျးကွျော)(မုန်ညှင်းစိမ်းကြော်)
Fried Long Bean (ပဲသီးကွျော)(ပဲသီးကြော်)
Fried Quail Egg (ငုံးဥကွျော)(ငုံးဥကြော်)
Sweet & Sour Fried Chicken Wings (ကွကျတောငျပံခြိုခဉျြကွျော)(ကြက်တောင်ပံချိုချဉ်ကြော်)
Fried Cheesy Chicken (ခြိဈကွကျသားတုံးကွျော)(ချိစ်ကြက်သားတုံးကြော်)
Crispy Chicken (ကွကျကွှပျကွျော)(ကြက်ကြွပ်ကြော်)
Crispy Honey Chicken (ကွကျသားပြားရညျကွျော)(ကြက်သားပျားရည်ကြော်)
Fried Chicken Wings (ကွကျတောငျပံကွျော)(ကြက်တောင်ပံကြော်)
Steamed Hlisa Fish (ငါးသလောကျပေါငျး)(ငါးသလောက်ပေါင်း)
Indian Fried Chicken Masala 3pcs (အိန်ဒိယစတိုငျ ကွကျသားမဆလာကွျော)(အိန္ဒိယစတိုင် ကြက်သားမဆလာကြော်)
Indian Fried Honey Chicken Masala 3pcs (အိန်ဒိယစတိုငျ ကွကျသားပြားရညျမဆလာကွျော)(အိန္ဒိယစတိုင် ကြက်သားပျားရည်မဆလာကြော်)
Indian Fried Honey Chicken Wings Masala 3pcs (အိန်ဒိယစတိုငျ ကွကျတောငျပံပြားရညျမဆလာကွျော)(အိန္ဒိယစတိုင် ကြက်တောင်ပံပျားရည်မဆလာကြော်)
Grilled Eggplant Salad (ခရမျးသီးမီးဖုတျသုတျ)
Tenderize Eggplant (ခရမျးသီးနှပျ)
Tenderize Eggplant with Dry Shrimp (ပုဇှနျခွောကျခရမျးသီးနှပျ)
Fried Catfish (ငါးခူကွျော)
Catfish Curry (ငါးခူဆီပွနျ)
Fried Seabass (ကကတျတဈပွနျကွျော)
Sweet Seabass Curry (ကကတျတဈအခြိုနှပျ)
Masala Seabass (ကကတျတဈ မဆလာ)
Steamed Masala Seabass (ကတျသပေါငျးမဆလာ)
Vegetarian Tomato Curry (သကျသကျလှတျခရမျးခဉျြသီးခကျြ)
Fried Cauliflower with Egg (ပနျးပှငျ့ကွကျဥကွျော)
Two Meat + Fried Vegetable + Soup + Rice
အသား (၂) မြိုး + အရှကျကွျော + ဟငျးခြို ၁ မြိုး + ထမငျးတို့စရာ
အသား (၂) မျိုး + အရွက်ကြော် + ဟင်းချို ၁ မျိုး + ထမင်းတို့စရာ
Pickled Rice Salad + Omelette (လကျဖကျထမငျး+ကွကျဥကွျော)(လက်ဖက်ထမင်း+ကြက်ဥကြော်)
Pickled Rice Salad (လကျဖကျထမငျး)(လက်ဖက်ထမင်း)
Hot & Sour Chicken Set (ကွကျခြဥျစပျ Set) (ကြက်ချဉ်စပ် Set)
Chicken Kung Pao Set (ကွကျကုနျးဘောငျ Set ) (ကြက်ကုန်းဘောင် Set)
Fired Chicken Ball Set (ကွကျသားလုံးကွျော Set) (ကြက်သားလုံးကြော် Set)
Sweet & Sour Chicken Ball Set (ကွကျသားလုံးခြိုခြဥျ Set)(ကြက်သားလုံးချိုချဉ် Set)
Hot & Sour Chicken Ball Set (ကွကျသားလုံးခြဥျစပျ) (ကြက်သားလုံးချဉ်စပ်)
Chicken Ball Kung Pao Set (ကွကျသားလုံးကုနျးဘောငျ Set) (ကြက်သားလုံးကုန်းဘောင် Set)
Steamed Rice with Chicken Set (ကွကျထမငျးပေါငျး Set) (ကြက်ထမင်းပေါင်း Set)
Chicken Basil Set (ကွကျသားပငျစိမျး Set) (ကြက်သားပင်စိမ်း Set)
Stir Fried Minced Chicken Set (ကွကျတောကျတောကျကွျော Set) (ကြက်တောက်တောက်ကြော် Set)
Minced Chicken Set (ကွကျစငျးကော Set) (ကြက်စင်းကော Set)
Chicken Clay Pot Set (ကွကျမွအေိုး Set) (ကြက်မြေအိုး Set)
Chicken Kachin Set (ကွကျကခငျြခကျြ Set) (ကြက်ကချင်ချက် Set)
Crispy Dried Chicken Set (ကွကျခွောကျစပျ Set) (ကြက်ခြောက်စပ် Set)
Chicken Mala Curry Set (ကွကျသားမာလာဟငျး Set) (ကြက်သားမာလာဟင်း Set)
Sweet & Sour Chicken+Fried Morning Glory+Rice (ကွကျသားခြိုခဉျြ+ကနျစှနျးရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားချိုချဉ်+ကန်စွန်းရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Sour & Spicy Chicken+Fried Vegetable+Rice (ကွကျသားခဉျြစပျ+အရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားချဉ်စပ်+အရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Kung Bao+Sour Soup+Rice (ကွကျသားကုနျးဘောငျ+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားကုန်းဘောင်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Fried Chicken Ball+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ကွကျသားလုံးကွျော+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+ထမငျး)(ကြက်သားလုံးကြော်+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+ထမင်း)
Sour & Spicy Fried Chicken Ball+Fried Morning Glory+Rice (ကွကျသားလုံးခဉျြစပျ+ကနျစှနျးရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားလုံးချဉ်စပ်+ကန်စွန်းရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Ball Kung Bao+Fried Vegetable+Sour Soup+Rice (ကွကျသားလုံးကုနျးဘောငျ+အရှကျကွျော+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားလုံးကုန်းဘောင်+အရွက်ကြော်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Sweet & Sour Fried Chicken Ball+Fried Morning Glory+Rice (ကွကျသားလုံးခြိုခဉျြ+ကနျစှနျးရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားလုံးချိုချဉ်+ကန်စွန်းရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Bone Dal Curry+Sour Salad+Rice (ကွကျရိုးကုလားပဲဟငျး+အခဉျြသုပျ+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်ရိုးကုလားပဲဟင်း+အချဉ်သုပ်+တို့စရာ+ထမင်း)
Giblets Curry+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ကွကျသဲမွဈ+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သဲမြစ်+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Masala Curry+Fried Vegetable+Dal Curry+Rice (ကွကျသားမဆလာနှပျ+အရှကျကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားမဆလာနှပ်+အရွက်ကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Curry+Fried Vegetable+Del Curry+Rice (ကွကျသားဆီပွနျ+အစိမျးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားဆီပြန်+အစိမ်းကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Fried Chicken (Spicy)+Fried Roselle+Sour Soup+Rice (ကွကျသားကွျော(အစပျ)+ခဉျြပေါငျကွျော+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားကြော်(အစပ်)+ချဉ်ပေါင်ကြော်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Floss+Fried Vegetable+Dal Curry+Rice (ကွကျသားမှကွျော+အရှကျကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်သားမွကြော်+အရွက်ကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Chicken Bone Masala+Fried Vegetable+Dal Curry+Rice (ကွကျရိုးမဆလာ+အသီးအရှကျကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်ရိုးမဆလာ+အသီးအရွက်ကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Omelet+Pennywort Salad+Fried Chile+Rice (ကွကျဥကွျော+ မွငျးခှာရှကျသုပျ+ ငွုပျသီးကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်ဥကြော်+ မြင်းခွာရွက်သုပ်+ ငြုပ်သီးကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Omelette+Pennywort+Fried Chile+Rice (ကွကျဥမှကွေျော+ မွငျးခှာရှကျသုပျ+ ငွုပျသီးကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ကြက်ဥမွှေကြော်+ မြင်းခွာရွက်သုပ်+ ငြုပ်သီးကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Sour Egg Curry+Fried Morning Glory+Dal Curry+Rice (ဘဲဥခဉျြဟငျး+ကနျစှနျးရှကျကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ဘဲဥချဉ်ဟင်း+ကန်စွန်းရွက်ကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Egg Curry+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ဘဲဥဆီပွနျ+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ဘဲဥဆီပြန်+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Prawn Curry+Burmase Spicy Dried Shrimp Curry+Sour Soup+Rice (ပုဇှနျဆီပွနျ+ခဉျြဟငျး+ငံပွာရညျခကျြ+တို့စရာ+ထမငျး)(ပုဇွန်ဆီပြန်+ချဉ်ဟင်း+ငံပြာရည်ချက်+တို့စရာ+ထမင်း)
Lobster (Spicy)+Fried Roselle (or) Fried Chile+Sour Soup (or) Dal Curry+Rice (ပုဇှနျထုပျကွီးဆီပွနျ (အစပျ)+ခဉျြပေါငျကွျော (သို့) ငွုပျသီးကွျော+ခဉျြဟငျး (သို့) ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ပုဇွန်ထုပ်ကြီးဆီပြန် (အစပ်)+ချဉ်ပေါင်ကြော် (သို့) ငြုပ်သီးကြော်+ချဉ်ဟင်း (သို့) ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Lobster (Sweet)+Fried Roselle (or) Fried Chile+Sour Soup (or) Dal Curry+Rice (ပုဇှနျထုပျကွီးဆီပွနျ (အခြို)+ခဉျြပေါငျကွျော (သို့) ငွုပျသီးကွျော+ခဉျြဟငျး (သို့) ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ပုဇွန်ထုပ်ကြီးဆီပြန် (အချို)+ချဉ်ပေါင်ကြော် (သို့) ငြုပ်သီးကြော်+ချဉ်ဟင်း (သို့) ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
River Prawn Curry (Spicy)+Fried Roselle (or) Fried Chile+Sour Soup (or) Dal Curry+Rice (ပုဇှနျထုပျဆီပွနျ (အစပျ)+ခဉျြပေါငျကွျော (သို့) ငွုပျသီးကွျော+ခဉျြဟငျး (သို့) ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ပုဇွန်ထုပ်ဆီပြန် (အစပ်)+ချဉ်ပေါင်ကြော် (သို့) ငြုပ်သီးကြော်+ချဉ်ဟင်း (သို့) ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
River Prawn Curry (Sweet)+Fried Roselle (or) Fried Chile+Sour Soup (or) Dal Curry+Rice (ပုဇှနျထုပျဆီပွနျ (အခြို)+ခဉျြပေါငျကွျော (သို့) ငွုပျသီးကွျော+ခဉျြဟငျး (သို့) ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ပုဇွန်ထုပ်ဆီပြန် (အချို)+ချဉ်ပေါင်ကြော် (သို့) ငြုပ်သီးကြော်+ချဉ်ဟင်း (သို့) ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Fish Cake Curry+Fried Bamboo-shoot+Sour Soup+Rice (ငါးဖယျဆီပွနျ+မြှဈကွျော+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးဖယ်ဆီပြန်+မျှစ်ကြော်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Fried Mirgal Fish Curry (Spicy)+Fried Vegetable+Dal Curry+Rice (ငါးကွငျးပွနျကွျော (အစပျ)+အရှကျကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးကြင်းပြန်ကြော် (အစပ်)+အရွက်ကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Fried Mirgal Fish Masala+Fried Vegetable+Dal Curry+Rice (ငါးကွငျးကွျောမဆလာနှပျ+အရှကျကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးကြင်းကြော်မဆလာနှပ်+အရွက်ကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Dried Fish Curry+Fried Vegetable+Sour Soup+Rice (ငါးခွောကျဟငျး+အရှကျကွျော+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးခြောက်ဟင်း+အရွက်ကြော်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Rakhine Style Mirgal Fish Curry+Sour Soup+Rice (ငါးကွငျးရခိုငျခကျြ+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးကြင်းရခိုင်ချက်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Butter Fish Masala Curry+Fried Vegetable+Rice (ငါးတနျမဆလာဟငျ:+အရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးတန်မဆလာဟင်:+အရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Rakhine Style Cuttle Fish Curry+Fried Vegetable+Rice (ပွညျကွီးငါးဟငျး (ရခိုငျခကျြ)+အသီးရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ပြည်ကြီးငါးဟင်း (ရခိုင်ချက်)+အသီးရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Mutton Masala Curry+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ဆိတျသားမဆလာနှပျ+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ဆိတ်သားမဆလာနှပ်+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Fried Mutton (Spicy)+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ဆိတျသားကွျော (အစပျ)+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ဆိတ်သားကြော် (အစပ်)+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Mutton Innards Curry+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ဆိတျကလီစာ+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ဆိတ်ကလီစာ+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Cuttle Fish Kung Bao+Fried Vegetable+Sour Soup+Rice (ပွညျကွီးငါးကုနျးဘောငျ+အရှကျကွျော+ခဉျြဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ပြည်ကြီးငါးကုန်းဘောင်+အရွက်ကြော်+ချဉ်ဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Rakhine Style Butter Fish Curry+Fried Vegetable+Rice (ငါးတနျရခိုငျခကျြ+အရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးတန်ရခိုင်ချက်+အရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Butter Fish Curry+Fried Chile+Dal Curry+Rice (ငါးတနျဆီပွနျ+ ငွုပျသီးကွျော+ပဲဟငျး+တို့စရာ+ထမငျး)(ငါးတန်ဆီပြန်+ ငြုပ်သီးကြော်+ပဲဟင်း+တို့စရာ+ထမင်း)
Crab Masala+Fried Vegetable+Rice (ဂဏနျးမဆလာ+အရှကျကွျော+တို့စရာ+ထမငျး)(ဂဏန်းမဆလာ+အရွက်ကြော်+တို့စရာ+ထမင်း)
Seaweed Salad (ကြောကျပှငျ့သုပျ) (ကျောက်ပွင့်သုပ်)
Century Egg Salad (ဆေးဘဲဥသုပျ) (ဆေးဘဲဥသုပ်)
Carrot Salad (ဥနီသုပျ) (ဥနီသုပ်)
Kailan Salad (ကိုကျလနျသုပျ) (ကိုက်လန်သုပ်)
Watercress Salad (ကနျဇှနျးရှကျသုပျ) (ကန်ဇွန်းရွက်သုပ်)
Anchovies Salad (ငါးနီတူသုပျ) (ငါးနီတူသုပ်)
Squid Salad (ကငျးမှနျသုပျ) (ကင်းမွန်သုပ်)
Cuttlefish Salad (ပွညျကွီးငါးသုပျ) (ပြည်ကြီးငါးသုပ်)
Raw Prawn Salad (ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်) (ပုဇှနျအစိမျးသုပျ)
Prawn Salad (ပုဇှနျအကကျြသုပျ) (ပုဇွန်အကျက်သုပ်)
Clam Salad (သှေးဂုံးသုပျ) (သွေးဂုံးသုပ်)
Glass Noodle Salad (ပဲကွာဇံသုပျ) (ပဲကြာဇံသုပ်)
Rice with Red Bean Paste Salad (ပုနျးရညျကွီးထမငျးသုပျ) (ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်)
Pyay Rice Salad (ပွညျထမငျးသုပျ) (ပြည်ထမင်းသုပ်)
Rice with Potato Salad (အာလူးထမငျးသုပျ) (အာလူးထမင်းသုပ်)
Grilled Seabass Fish (ကကတဈငါးကငျ)(ကကတစ်ငါးကင်)
Grilled Tilapia Fish (တီလားဗီးယားငါးကငျ)(တီလားဗီးယားငါးကင်)
Grilled Chicken (ကွကျသားကငျ)(ကြက်သားကင်)
Grilled Chicken Breast (ကွကျသားရငျပုံကငျ)(ကြက်သားရင်ပုံကင်)
Fried Chicken Wings 3pcs (ကွကျတောငျပံကွျော)(ကြက်တောင်ပံကြော်)
Tandoori Honey Chicken BBQ
Tandoori Honey Chicken Wings BBQ
Quail BBQ (10-15pcs) (ငုံးဥကငျ)(ငုံးဥကင်)
Prawn Shue Shae (ပုဇှနျရှူးရှဲ) (ပုဇွန်ရှူးရှဲ)
Cuttlefish Shue Shae (ပွညျကွီးငါးရှူးရှဲ) (ပြည်ကြီးငါးရှူးရှဲ)
Squid Shue Shae (ကငျးမှနျရှူးရှဲ) (ကင်းမွန်ရှူးရှဲ)
Crab Shue Shae (ဂဏနျးရှူးရှဲ) (ဂဏန်းရှူးရှဲ)
Clam Shue Shae (သှေးဂုံးရှူးရှဲ) (သွေးဂုံးရှူးရှဲ)
Octopus Shue Shae (ရဘေဝဲပငျလယျစာအစုံရှူးရှဲ) (ရေဘဝဲပင်လယ်စာအစုံရှူးရှဲ)
Mala Xiang Guo (မာလာရှမျးကော) (မာလာရှမ်းကော)
Choice of chicken or seafood
Mala Curry (မာလာဟငျး) (မာလာဟင်း)
French Fries (အာလူးချောင်းကြော်)(အာလူးခြောငျးကွျော)
Potato Chips (အာလူးပွားကွျော)(အာလူးပြားကြော်)
Prawn & Potato Roll (ပုဇှနျအာလူးလိပျ) (ပုဇွန်အာလူးလိပ်)
Hot Sour Japanese Tofu (ဂပြနျတို့ဟူးခြဥျစပျ) (ဂျပန်တို့ဟူးချဉ်စပ်)
Japanese Tofu Clay Pot (ဂပြနျတို့ဟူးမွအေိုး) (ဂျပန်တို့ဟူးမြေအိုး)
Myee Shay Clay Pot (မွအေိုးမွီးရှညျ) (မြေအိုးမြီးရှည်)
Sticky Rice Noodle (ဆနျစီးခေါကျဆှဲ) (ဆန်စီးခေါက်ဆွဲ)
Fried Dumpling (ဖကျထုပျကွျော) (ဖက်ထုပ်ကြော်)
Dumpling Si Chat (ဖကျထုပျဆီခကျြ) (ဖက်ထုပ်ဆီချက်)
Dumpling Soup (ဖကျထုပျပွုတျ) (ဖက်ထုပ်ပြုတ်)
Fish Head Soup (ငါးခေါငျးဟငျးခြို) (ငါးခေါင်းဟင်းချို)
Fish Soup (ငါးသောကျဆမျး) (ငါးသောက်ဆမ်း)
Prawn Soup (ပုဇှနျသောကျဆမျး) (ပုဇွန်သောက်ဆမ်း)
Seafood Food (အဏ်ဏဝါမီးဖို) (အဏ္ဏဝါမီးဖို)
Farmer Soup (လယျသမားဟငျးခြို) (လယ်သမားဟင်းချို)
Crab Soup (ဂဏနျးသောကျဆမျး) (ဂဏန်းသောက်ဆမ်း)
Chicken Soup (ကွကျသောကျဆမျး) (ကြက်သောက်ဆမ်း)
12 Kinds Soup (၁၂ မြိုးဟငျးခြို) (၁၂ မျိုးဟင်းချို)
Som Tom Soup (စှနျတနျဟငျးခြို) (စွန်တန်ဟင်းချို)
12 Kinds with Chicken Soup (၁၂ မြိုးကွကျသားဟငျးခြို) (၁၂ မျိုးကြက်သားဟင်းချို)
Papaya Pounded (သင်ျဘောသီးထောငျး) (သင်္ဘောသီးထောင်း)
Corn Pounded (ပွောငျးဖူးထောငျး) (ပြောင်းဖူးထောင်း)
Cucumber Pounded (သခှားသီးထောငျး) (သခွားသီးထောင်း)
Rice Noodle Pounded (မုနျ့ဖကျထောငျး) (မုန့်ဖက်ထောင်း)
Raw Prawn Pounded (ပုဇှနျအစိမျးထောငျး) (ပုဇွန်အစိမ်းထောင်း)
Prawn Pounded (ပုဇှနျအကကျြထောငျး) (ပုဇွန်အကျက်ထောင်း)
Raw Crab Pounded (ဂဏနျးအစိမျးထောငျး) (ဂဏန်းအစိမ်းထောင်း)
Crab Pounded (ဂဏနျးအကကျြထောငျး) (ဂဏန်းအကျက်ထောင်း)
Cuttlefish Pounded (ပွညျကွီးငါးထောငျး) (ပြည်ကြီးငါးထောင်း)
Squid Pounded (ကငျးမှနျထောငျး) (ကင်းမွန်ထောင်း)
Clam Pounded (သှေးဂုံးထောငျး) (သွေးဂုံးထောင်း)
Mixed Seafood Pounded (ပငျလယျစာအစုံထောငျး) (ပင်လယ်စာအစုံထောင်း)
Enoki Mushroom Pounded (အပျမှိုထောငျး) (အပ်မှိုထောင်း)
Chicken Feet Pounded (ကွကျခွထေောကျထောငျး) (ကြက်ခြေထောက်ထောင်း)
Fried Fish & Papaya Pounded (ငါးကွျောသင်ျဘောသီးထောငျး) (ငါးကြော်သင်္ဘောသီးထောင်း)
Octopus Pounded (ရဘေဝဲထောငျး) (ရေဘဝဲထောင်း)
Mama Pounded (မားမားထောငျး) (မားမားထောင်း)
Fried Noodle (ခေါကျဆှဲကွျော) (ခေါက်ဆွဲကြော်)
Choice of vegetable, chicken or seafood
Choice of vegetable, chicken, prawn or seafood
Chinese Fried Rice (တရုတျထမငျးကွျော) (တရုတ်ထမင်းကြော်)
Thai Style Fried Rice (ယိုးဒယားထမင်းကြော်)(ယိုးဒယားထမငျးကွျော)
Thai Style Fish Paste Fried Rice (ယိုးဒယားငပိထမငျးကွျော) (ယိုးဒယားငပိထမင်းကြော်)
Tom Yum Fried Rice (တုန်ယမ်းထမင်းကြော်) (တုနျယမျးထမငျးကွျော)
Pineapple Fried Rice (နာနတျသီးထမငျးကွျော) (နာနတ်သီးထမင်းကြော်)
Plain Watercress (ကနျဇှနျးပလိနျး) (ကန်ဇွန်းပလိန်း)
Plain Kailan (ကိုကျလနျပလိနျး) (ကိုက်လန်ပလိန်း)
Mustard Plain (မုနျညှငျးဖွူပလိနျး) (မုန်ညှင်းဖြူပလိန်း)
Stir Fry Chayote Leaf (ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျော) (ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်)
Stir Fry Mixed Vegetable (အစိမျးကွျော) (အစိမ်းကြော်)
Stir Fry Cauliflower (ပနျးပှငျ့ကွျော) (ပန်းပွင့်ကြော်)
Stir Fry Watercress with Mushroom (မှိုကနျဇှနျး) (မှိုကန်ဇွန်း)
Crispy Fried Prawn (ပုဇှနျကွှပျကွျော) (ပုဇွန်ကြွပ်ကြော်)
Crispy Fried Cuttlefish (ပွညျကွီးငါးကွှပျကွျော) (ပြည်ကြီးငါးကြွပ်ကြော်)
Dried Fried Cuttlefish (ပွညျကွီးငါးခွောကျစပျ) (ပြည်ကြီးငါးခြောက်စပ်)
Hot & Sour Octopus (ရဘေဝဲခဉျြစပျ) (ရေဘဝဲချဉ်စပ်)
Hot & Sour Seafood (ပင်လယ်စာချဉ်စပ်)(ပငျလယျစာခဉျြစပျ)
(ပငျလယျစာအစုံ ကှမျ့ထနျ) (ပင်လယ်စာအစုံ ကွမ့်ထန်)
Sweet & Sour Chicken (ကွကျခြိုခဉျြ) (ကြက်ချိုချဉ်)
Hot & Sour Chicken (ကွကျခဉျြစပျ) (ကြက်ချဉ်စပ်)
Chicken Kung Pao (ကွကျကုနျးဘောငျ) (ကြက်ကုန်းဘောင်)
Fried Chicken Slice (ကွကျသားပွားကွျော) (ကြက်သားပြားကြော်)
Fried Chicken (ကွကျသားခြောငျးကွျော) (ကြက်သားချောင်းကြော်)
Sweet & Sour Chicken Ball (ကွကျသားလုံးခြိုခဉျြ) (ကြက်သားလုံးချိုချဉ်)
Steamed Chicken with Rice (ကွကျသားထမငျးပေါငျး) (ကြက်သားထမင်းပေါင်း)
Chicken Basil (ကွကျသားပငျစိမျး) (ကြက်သားပင်စိမ်း)
Stir Fried Minced Chicken (ကွကျတောကျတောကျကွျော) (ကြက်တောက်တောက်ကြော်)
Chicken Minced (ကွကျစငျးကော) (ကြက်စင်းကော)
Chicken Clay Pot (ကွကျမွအေိုး) (ကြက်မြေအိုး)
Chicken Kachin (ကွကျကခငျြခကျြ) (ကြက်ကချင်ချက်)
Crispy Spicy Chicken (ကွကျခွောကျစပျ) (ကြက်ခြောက်စပ်)
Chicken Mala Curry (ကွကျမာလာဟငျး) (ကြက်မာလာဟင်း)
Crispy Fried Chicken (ကွကျကွှပျကွျော) (ကြက်ကြွပ်ကြော်)
Chicken Thigh Si Chat (ကွကျပေါငျဆီခကျြ) (ကြက်ပေါင်ဆီချက်)
Chicken Si Chat (ကွကျဆီခကျြ) (ကြက်ဆီချက်)
Steamed Fish Lemon Sauce (ငါးသံပုရာပေါငျး) (ငါးသံပုရာပေါင်း)
Fish Kung Poa (ငါးကုန်းဘောင်) (ငါးကုနျးဘောငျ)
Mala Fish Curry (ငါးမာလာ) (ငါးမာလာ)
Fish Clay Pot (ငါးမွအေိုး) (ငါးမြေအိုး)
Grilled Fish in Aluminium Foil (ငါးခဲပတျကငျ) (ငါးခဲပတ်ကင်)
Crispy Fried Fish (ငါးကွှပျကွျော) (ငါးကြွပ်ကြော်)
Fried Fish Sticks (ငါးချောင်းကြော်) (ငါးသားခြောငျးကွျော)
Fried Fish Slice (ငါးအသားပွားကွျော) (ငါးအသားပြားကြော်)
Fish Mayonnaise (ငါးမ‌ရောနဈ) (ငါးမ‌ရောနစ်)
Crispy Fried Fish Si Chat (ငါးကောငျလုံးကွှပျကွျောဆီခကျြ) (ငါးကောင်လုံးကြွပ်ကြော်ဆီချက်)
Fish Soy Bean (ငါးပဲငပိ) (ငါးပဲငပိ)